Home News Xukuumada Kheyre iyo Wasiir Islow oo Ku Fashilan Sugida Amanka Xili Mooshino...
Xukuumada Kheyre iyo Wasiir Islow oo Ku Fashilan Sugida Amanka Xili Mooshino Ay Ku Mashquul San Yihiin
Tan iyo markii ay timid xukuumadda Ra’iisul wasaare Kheyre waxaa la isku dayey in la adkeeyo ammaanka magaalada Muqdisho, iyadoo la xiray waddooyin badan oo magaalada ah iyado dhaman ay fashilmeen qorshahaasi.
Hase ahaatee qorshaha ay la timid wasaaradda amniga, gar ahaan wasiir Islow waa uu socon waayey, sababtuna waxay tahay ammaanka ayaaba kasii daray.
Waxaa dhintey Maalin qura dad ka badan intii qaraxyada ku dhimatay dowladihii dalka soo maray, gaar ahaan laga soo bilaabo midda C/laahi Yuusuf.
Hadda waxaa xaalku ku xun yahay Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha Maxamed Abukar Islow Ducaalle.
islow oo saxib dhaw la ah kheyre inta badana kala so muuqda shaashadaha aya xilkaasi ku fashilmay iyado uu hada ku mashquul san yahay Mooshin iyo howlo an loga bahneen waxana qaraan uu imanaya iyado shirar mooshinka Jawari uu kaga qeyb galo muqdisho.
Raiisul Wasaare Kheyre iyo hey’adihisa amnka aya ku fahilmay sugida amanka waxana inta badan dhaca weeraro dhex mara ciidanka dowlada dhexdooda iyo qaraxyo,dilal qorsheysan,iyo la sumeeyo haweenka an hubeysnen ee wadooyinka nadiifiya.